Tetikasa Anaty Aterineto Hanaraha-maso Ny Toetry Ny Làlana Any Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2012 2:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Català, русский
Fomba fanaraha-maso ny toetry ny làlana sy ny fampanaraham-penitra azy amin’ireo lamina farany napetraky ny governemanta ny tetikasa “RosYama” [ru] [ara-bakiteny : “Ny lavaka eny amin’ny làlana Rosiana”]. Na iza na iza mahita làlana tsy manaraka ireo fenitra ireo dia afaka mampiasa ny tolotra RosYama.
Nilaza tamin’i Evgeny Voropai avy ao amin’ireo Trano Fitaratry ny Teknolojia Sosialy, ny mpandrindra ny RosYama, Fyodor Ezeevfa hoe efa ela no tsy hitany intsony ny fetra manelanelana ny tontolo anaty sy ivelan’ny aterineto, sy ny mampandaitra ny tetikasa “voakendry” mitaha amin'ireo iraisan'ny rehetra.
Fyodor Yezeev. Sary nomen'ny tompony.
Fyodor Ezeev: Mino aho fa misy singa telon’ny RosYama izay mitondra ny fahombiazany. Voalohany, ny fitombonan’ilay fotokevitra – ny lavaka eny amin’ny arabe dia olana ho an’ny rehetra. Faharoa manaraka izay, ny lanjan'ny toerana misy an'i Navalny [mpitoraka bilaogy sy mafana fo mpanohitra fanta-daza] izay nilaza ny fahafantaran’ny olona maro mikasika ilay tetikasa hatramin’ny voalohany. Fahatelo, ny mampiavaka ny RosYama amin’ireo tetikasa mitovitovy aminy noho izy manampy ireo mpampiasa azy mandritry ny fotoana anaovany ny fitarainany sy ny fandraisana an-tanana ireo endrika araky ny lalàna.
Evgeny Voropai: Ahoana ny fiovan’ny fihetsik’ireo mpampiasa hatramin’ny nametrahana ny RosYama voalohany.
F.E.: Nihena teo amin’ny roa na ampahatelony teo ny isan’ny mpitsidika, fa nitombo nifanohitra tamin’izay kosa ny isan’ny lavaka voarakitra. Izay midika fa lavaka avo dimy heny noho ny teo aloha no raketin’ny mpitsidika tsirairay. Nijanona tsy nitsidika ilay vohikala intsony ny olona noho ny fitiavana mikarokaroka, fa miha-betsaka kosa ireo izay mampiasa azy araka ny tokony ho izy.
E.V.: Tolotra fametrahana fitarainana mandeha ho azy izay manana salan’isanà mpampiasa mandray anjara mavitrika ny RosYama. Teneno anay hoe ny zavatra ataon’ireo ekipan’ny tetikasa any Môskoa sy any amin’ireo faritra hafa.
F.E.: Tsy sampandraharaha mandeha ho azy hampitàna ny fitarainana ny RosYama. Ny fitarainan’ireo mpampiasa dia tsy maintsy alefa manokana. Miasa anatin’io vohikala io ny ekipan’ny RosYama ary manoro hevitra ireo mpampiasa azy.
E.V.: Rehefa maka endrika fiaraha-miasa ny tetikasa izay “Fandraisana an-tànana ireo mpampiasa azy”, dia zava-dehibe tokoa ny mampirisika azy ireo handray anjara. Inona ary no tondro hafa afaka maneho fa mahomby sy miasa ny tetikasanareo?
F.E.: Ny hany famantarana na mandaitra na tsia ny “asa”, dia ny fisian’ny vokatra azo tsapain-tanana na tsia. Ny fanampenana ny lavaka amin’ny arabe efa mihoatra ny 8.500 dia anisan’ireo vokatra azo tsapain-tanan’ny RosYama.
E.V.: Nosoratanao tao anatin’ny bilaoginao fa taorian’ireo adihevitra [nokarakarain'ny mpanohitra tato ho ato], dia nitombo 58% ny isan’ireo mpitsidika. Te hilaza ve ianao fa ny fitantanan-draharaham-bahoaka amin’ny tetikasa anaty aterineto dia mahomby kokoa noho ny fitantanana mahazatra?
F.E.: Ho toy ny fitsipika, ny fahombiazan’ny haivarotra rehetra dia ao anatin’ny fe-potoana fohy dia fohy. Mino aho fa mila mifantoka kokoa amin’ny fanomezana fahafahana ho an’ireo mpampiasa sy fanamoràna ny fomba fandraisany tànana azy ny RosYama. Mitondra vokatra tsara maharitra ireo hetsika ireo.
E.V.: Ny tontolon'ny fitorahana bilaogy dia namaly tsy tapaka ny fandraisanao anjara tamin'ny fifidianana ny Filankevitra Mpandrindra ny mpanohitra. Tsy nisy atahorana ve hoe hisy voka-dratsy ho an’ny RosYama izany?
F.E.: Tsia, tsy nisy tahotra mikasika an’izany.
E.V.: Ny “Mpifaninana fito ho anà tetikasa fito” [vondrom-pifidianana iray tao amin'ny fifidianana ny filankevitra mpandrindra] dia nosoloin'ireo mpitantana sy mpandrindra ireo tetikasa anaty aterineto tena. Raha tsy maintsy miasa ivelan'ny aterineto izy ireo, inona no mety fiantraikan'izany eo amin'ny hetsika anaty aterineto fanaony?
F.E.: Efa ela no tsy hitako intsony ny fetra teo anelanelan’ny tontolo anaty sy ivelan’ny aterineto. Fomba iray fampitàna vaovao sy fampifandraisana olona fotsiny ny aterineto. Sahala amin’ny finday, ohatra. Ny olona iray dia mampiasa ny finday himenomenonana mandritry ny ora maro, raha ny hafa kosa manafatra ny mpanome tolotra azy hivarotra fitoeran’asa milanja dollars aman-tapitrisany.
E.V.: Efa nanana [vohikala miady amin’ny kolikoly] isika talohan’ny “RosYama”, sahala amin’ny “RosPil”, izay narahin’ny “RosUznik” [fanampiana ara-bola ara-dalàna ho an’ireo mpanohitra nahiditra am-ponja] ary avy eo [vohikala fanaraha-maso ny fifidianana] “RosVybory”. Nanaraka ny fifindran’ireo olona tokam-bolana avy taminà tetikasa iray ho amin’ny iray hafa ve ianao?
F.E.: Tsy nanaraka aho. Mino aho fa tsy nisy izany na manakaiky ny aotra mihitsy. Raha misy olona liana tamin’ny tolotry ny fanjakana dia tsy hivadika amin’izay noho ny RosUznik izy ireny.
E.V.: Notsindrianao tao amin’ny lahatsoratrao tao amin’ny LiveJournal, fa tsy mahita ny fifandraisan’ny olany mivantana sy ny fifidianana malalaka ireo mpampiasa. Nefa mandritra izany, ireo “tetikasan’ny Ros” ireo dia voakendry tsara ary tsy mamela ireo mpampiasa hahita ireo olana ireo ho toy ny ampahan'ny anankiray lehibe kokoa saro-bahàna. Efa nisy tetikady hanambàrana ireo tetikasa ireo ho iray ihany, saingy mivelatra bebe kokoa ve?
F.E.: Mino aho fa ny tetikasanay dia hahatratra ny fahombiazany noho ny “maha-voakendry” azy. Mandaitra kokoa ny filaza hoe “manaova kely fa ataovy tsara” noho ny hoe “manaova betsaka fa ratsy”. Ary raha ny fifandraisan’ny olana mivantan’ny mponina sy ny fifidianana malalaka — ny fandraisany anjara anatinà tetikasa sahala amin’ny RosYama izay mamela azy hahita sy hahatsapa ity fifandraisany ity dia mahakasika tanteraka izany.
E.V.: Niasa tanatinà orinasa midadasika momba ny aterineto ianao, avy eo dia nanomboka ilay tetikasam-bahoaka RosYama. Nanova ny fomba fiasanao sy ny traikefanao eo amin’ny fiasàna ve izany?
F.E.: Miezaka maka ireo andraikitra aho izay tena mahaliana ahy ny famahàna azy. Tsy misy dikany loatra ho ahy ireo antony hafa tsy dia mafonja.
Notarihan’I Evgeny Voropai ity fanadihadiana ity, ary hita ao amin’ny vohikalan’I Teplitsa ny lahatsoratra tena izy.